အီးမေးလ်ပို့ရန် - ဂျီမေးလ် Outlook နဲ့အဘို့အ Fast & လုံခြုံတဲ့အီးမေးလ် | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » အီးမေးလ် & SMS ကို Apps ကပ » အီးမေးလ်ပို့ရန် - ဂျီမေးလ် Outlook နဲ့ & ပို Fast & လုံခြုံတဲ့အီးမေးလ်
အီးမေးလ်ပို့ရန် - ဂျီမေးလ် Outlook နဲ့ & ပိုပြီး APK ကိုများအတွက် Fast & လုံခြုံတဲ့အီးမေးလ်
Google က Store ကို 2017 အန်းဒရွိုက် Excellence အစီအစဉ် Winner PlayTheVerge - "န်းကျင်အလျင်မြန်ဆုံးကိုအီးမေးလ် app ကို ... "
အန်းဒရွိုက်အာဏာပိုင် - "အသုံးဝင် features တွေ ... အကြီးအ user interface ကို"
TechCrunch- "သင်ကဲ့သို့မေးလ် app ကိုအဆင့်မြှင့်ပေးထားပါတယ်"
က CNET- " ... တစ်ဦးသရမ်း inbox ရဲ့အပေါ်အမိန့်ချမှတ်သည် ... "
အက်ဒီဆင် (EasilyDo နေဖြင့်ယခင်ကအီးမေးလ်) Gmail, Yahoo Mail အပါအဝင်ကွဲပြားခြားနားသောပံ့ပိုးပေးရာမှန့်အသတ်မေးလ်အကောင့်ကိုစီမံခန့်ခွဲဖို့အမှတ်တံဆိပ်အသစ်လှပသောဒီဇိုင်း, တစ်လောကလုံးမေးလ် app ကို, AOL Mail ကိုဖြစ်ပါသည်, Hotmail, Outlook, ချိန်း, IMAP ကို, Alto, iCloud နှင့်ပိုပြီးအားဖြင့်အီးမေးလ် ။ မတူနိုင်တဲ့အမြန်နှုန်းနှင့် built-in စျေးဝယ်, ကုန်ကျစရိတ်, ခရီးသွားလာခြင်း, subscriptions ကိုဖွဲ့စည်းတူသောလူနေမှုပုံစံစတဲ့အခြေခံလိုအပ်ချက်များကိုစောင့်ရှောက်ရန်အနေနဲ့အသိဉာဏ်လက်ထောက်ကိုပူဇော်သက္ကာဘို့, မြေတက်ကနေအင်ဂျင်နီယာ။ အီးမေးလ်ကသင်၏စတော့ရှယ်ယာကိုအီးမေးလ် app ကိုများအတွက်စံပြ်စာပုံးကိုအစားထိုးဖြစ်ပါတယ်။
အီးမေးလ်ပို့ရန်နောက်ပိုင်းတွင်သင်အားသွင်းဖို့က hidden အခကြေးငွေသို့မဟုတ်အစီအစဉ်များကိုမသုံးစွဲဖို့ 100% အခမဲ့ဖြစ်ပါတယ်။
MULTIPLE Providence - အားလုံးပံ့ပိုးပေးနဲ့စုစည်းစာတိုက်ပုံးကိုဖန်တီးပါ။ Gmail, Yahoo Mail, ချိန်း, Outlook, ရုံး 365, Hotmail, AOL, iCloud နှင့် IMAP ကိုမေးလ်အကောင့်ထောက်ပံ့ပေးသည်။
ညျ့ဝ Interface ကိုအားလုံးကိုသင့်ရဲ့ပံ့ပိုးပေးရာမှမျိုးစုံစာတိုက်ပုံးများတစ်ပြိုင်တည်းချိန်ကိုက်
ပစ္စည်းဒီဇိုင်း & Lollipop ကို support
ပိုမိုမြန်ဆန် & မတ် Mail
Lightning Fast! - အဘယ်သူမျှမကပို load ဖို့မက်ဆေ့ခ်ျကိုစောင့်ဆိုင်း, ဒီ Android အတွက်ရရှိနိုင်အမြန်ဆုံးအီးမေးလ်က App ဖြစ်ပါတယ်။
built-in Intelligence ASSISTANT - အဖွင့်စရာမလိုဘဲသို့မဟုတ်အီးမေးလ်ရှာဖွေအမျိုးအစားအလိုက်အနည်းဆုံး-a-တစ်ချက်ရဲ့ inbox ကိုဖြတ်ပြီးပူးတွဲပါ, ဥပဒေကြမ်းများ & ပြေစာများနှင့်ဖျော်ဖြေမှုအပါအဝင်သော့ချက်အချက်အလက်ကြည့်ရှုပါ။
Junk မှနှုတ်ထွက် - တစ်နေရာတည်းတွင်သင့်အီးမေးလ်စာရင်းပေးသွင်းထားမှုများအားလုံးကိုစီမံခန့်ခွဲနှုတ်ထွက်ဖို့ကိုအသာပုတ်သို့မဟုတ်ကြယ်ပွင့်အကြိုက်ဆုံး။
REAL-TIME ခရီးသွားခြင်းအသိပေးချက်များ - အဘယ်သူမျှမကပိုနေတဲ့လေယာဉ်ခရီးစဉ်တစ်ဦးတံခါးဝပြောင်းလဲမှုသို့မဟုတ်နှောင့်နှေးရှိပါတယ်လျှင်ကြည့်ဖို့စစ်ဆေးနေ, အီးမေးလ်လူကြီးမင်းမြန်မြန်လေကြောင်းလိုင်းများထက်သင်အားအသိပေးပါ။ လေယာဉ်ခရီးစဉ်များ, ဟိုတယ်များနှင့်တစ်နေရာတည်းတွင်ပို။
တက်ကြွသောအသိပေးချက်များနဲ့အတူ PACKAGE တွင် Track - အဘယ်သူမျှမကပိုအထုပ်ခြေရာခံခြင်း codes တွေကိုရှာတွေ့မှအီးမေးလ်ကိုရှာဖွေနေ! တဦးတည်း folder ထဲမှာအားလုံးသင့်ရဲ့ packages များ၏ status စစ်ဆေးပါ။
အသိပေးချက်များ personalize - သင့်စာတိုက်ပုံးအသံများနှင့်တုန်ခါမှု setting များကိုစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ပါ။
သင့် Inbox ထဲတွင်အချိန်ကုန်သက်သာ
MOBILE Mail တည်ဆောက် SEARCH - သင့်ဖုန်းတွင်တစ်ဦးကအပြည့်အဝကို search engine ။ ပင်စူပါကြီးမားသောအကောင့်တစ်ခုကိုအီးမေးလ် app ထဲမှာအဆက်အသွယ်သို့မဟုတ်သော့ချက်စာလုံးများအားဖြင့်အားလုံးဖိုင်တွဲများ၏အမြန်ဆုံးရှာဖွေရေး။
ပို့မှုကိုပြန်ဖျက်ရန်, ဖျက်ခြင်းနှင့်အခြားသတင်းများကို EMAIL Actions - အဘယ်သူမျှမနောင်တ။ ဒါကြောင့်လှေတျတျောမူရဲ့ပင်ပြီးနောက်အီးမေးလ်ကိုပြန်ယူပါ။
ANDROID NOUGAT - ကို Message အုပ်စုနဲ့ Notification ကနေအမြန်အကြောင်းပြန်။ အားလုံးဝင်စာများရှာဖွေနေသို့မဟုတ်အသစ်မက်ဆေ့ခ်ျကိုရေးဆွဲများအတွက် launcher shortcuts တွေကိုရယူသုံးစွဲနိုင်။
ANDROID WEAR - အသံနှင့် Reply နှင့်သင့်လက်ပတ်နာရီမှသတိပေးချက်များလက်ခံရရှိသည်။
Gmail ကိုပံ့ပိုးမှုစင်တာ - အီးမေးလ်ထဲမှာသင့်ရဲ့ဂျီမေးလ် inbox ထဲကနေလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကို bundling ခံစားပါ။ configuration menu - သင့်ပွတ်ဆွဲမီနူးနဲ့အီးမေးလ်အမြင်လုပ်ရပ်များစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ပါ။
အကောင့်များမဖတ်ရ Mail - အလွယ်တကူဖတ်ပါခံရဖို့စောင့်ဆိုင်းနေအရာအားလုံးကိုရည်ညွန်း။
အများဆုံး inbox efficiency - ကျွန်ုပ်တို့၏ကျယ်ပြန့်မှတ်ဉာဏ်နှင့်ဘက်ထရီစမ်းသပ်မှုအီးမေးလ်အမြဲချောမွေ့ပြေးနေသည်အာမခံပါသည်။
လွယ်ကူရှင်းလင်း inbox DESIGN
အားလုံးအပေါ်ကိုထပ်အီးမေးလ်ကိုသင်ယူဖို့မလို - ရိုးရိုးအလုပ်လုပ် DESIGN ။
APP ကို ​​ICON မဖတ်ရတံဆိပ် - သင့် home screen ကနေတိုက်ရိုက်သင့်ရဲ့ Inbox ထဲတွင်သစ်ကိုအီးမေးလ်များကို Count ။
လျင်မြန်စွာသင့်ဝင်စာ Manage - တဦးတည်းရိုးရှင်းတဲ့်စာပုံးထဲကနေအားလုံးသင့်အီးမေးလ်အကောင့်ကိုပြန်ကြားပါ။ အီးမေးလ်ပို့ရန် Gmail, Yahoo Mail, AOL Mail, Hotmail, Outlook, ချိန်း, IMAP ကို, Alto, iCloud နှင့်ပိုပြီးထောက်ခံပါတယ်!
ငွေလက်ခံဖြတ်ပိုင်း Block ဖတ်ရန် - နောက်ကျောကိုစေလွှတ်ခံရခြင်းမှဖတ်လက်ခံဖြတ်ပိုင်းများပိတ်ဆို့ခြင်းအားဖြင့် privacy ကိုထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်စေ။
Local Storage တွင်သိမ်းဆည်း - မေးလ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစဉ်အတွင်း encrypted နှင့်ဖုန်းပေါ်မှာမဟုတ်ဘဲမိုဃ်းတိမ်၌သိုလှောင်ထား, ဖုန်းမှမရယူသည်။
သင့်ရဲ့စာတိုက်ပုံးသို့ပရီမီယံ AI အလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုထည့်လေ့မရှိသည့်အတုထောက်လှမ်းရေးကုမ္ပဏီအသုံးပြုနေသူများကဖန်တီး။ ကျွန်တော်တို့ကို mailsupport@edison.tech မှာသင့်ရဲ့အင်္ဂါရပ်တောင်းဆိုမှုများနှင့်တုံ့ပြန်ချက်ပေးပို့ပါ။
ကျွန်တော်တို့ကို5ကြယ်များ rates, ဒါမှမဟုတ် kudos အရွက်သူကိုလူတိုင်းအထူးကျေးဇူးတင်ရှိ! သင့်ရဲ့ထောက်ခံမှုကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖွဲ့တွေအများကြီးကိုဆိုလိုသည်!
Fixed Gmail ကိုဆက်သွယ်မှုပြဿနာ
Gmail ကို Outlook နဲ့ & ပိုပြီးများအတွက်အီးမေးလ် -Fast & လုံခြုံတဲ့အီးမေးလ်
72.89 ကို MB
အက်ဒီဆင် Software များ